Abuu xaniifa oo guul ka gaartay 21 November
Thursday September 22, 2016 - 18:08:27
Iyadoo horyaalka dhaliyarada Soomaaliya uu si xiisa leh uga soconayo garoonka Jaamacadaha ayaa maanta waxaa halkaa isku fara saaray kooxaha kala ah Abu xaniifa iyo 21 November, waxaana kooxda Abu xaniifa ay 2-0 madaxa dhulka ugu dhigtay kooxda 21 November.
Shariif qulateyn oo dhibcaha ka tirsatay Anadol
Thursday September 22, 2016 - 17:54:34
kooxaha kubadda cagta ee Shariif qulateyn iyo Anadol ayaa galabta waxa ay kulan kooda ka dhacday garoonka jaamacadaha ee magaaladda Muqdisho. Kooxda Shariif qulateyn, ayaa u awoodd sheegatay dhigeeda anadol, iyadoo kulanka ku dhamaaday 3-0 oo guusha ay ku raacday shariif qulateyn.
Thursday September 15, 2016 - 18:07:09
Cayaartii labaad ee tartanka dhalinyarada kubada cagta ee maanta la dheelay ayaa waxaa ku hardamay kooxaha Baarbe iyo Maxamuud Mire waxaana cayaartaasi ay kusoo idlaatay 2-0 oo ay guushu ku raacday kooxda Baarbe.
Kubada cagta oo Nashaad gelisay nolosha agoonta wax ka barata dugsiga Anatolia.
Wednesday August 19, 2015 - 16:59:27
Boqolaal aqoon Soomaaliyeed ah oo wax ku barta Dugsiga Anatolia ee Turkiga ayaa muujiyay rajo weyn oo ay ka qabaan in mustaqbalka dhow ay magac ku yeeshaan kubada Cagta kana mid noqdaan xulka qaranka Soomaaliya.